Wargeyska WSJ: Xubnaha Ugu Sareeya Ee Boqortooyada Sacuudiga Ayaa La Xiray - BANDHIGA
Wargeyska WSJ: Xubnaha Ugu Sareeya Ee Boqortooyada Sacuudiga Ayaa La Xiray
Mas’uuliyiinta Sucuudiga ayaa xirey saddex xubnood oo qoyska boqortooyada ah oo ay ku jiraan laba amiir oo sarsare, sida ay qoreen warbixinnada warbaahinta Mareykanka, taas oo muujineysa in amiirka taajirka ahi uu sii adkeynayo qabsashada awoodda.
Amiir Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, oo ah walaalka boqor Salmaan, iyo adeerka dhaxalka boqortooyada Amiir Mohammed bin Nayef ayaa guryahooda lagala baxay horaantii jimcihii ilaalada boqortooyada ka dib markii lagu eedeeyay khiyaano qaran, wargeyska Wall Street Journal ayaa werisay iyadoo laga soo xigtay ilo aan la magacaabin. Labadan amiir ayaa la sheegay inay qorsheynayeen inay xukunka ka tuuraan Boqor Salmaan iyo wiilka uu u magacaabay inuu ku guuleysto, amiirka dhaxal sugaha Mohammed bin Salman,
Wargayska New York Times ayaa sidoo kale ka warbixiyay xadhiga, isaga oo intaa ku daray in sidoo kale Prince Nayef walaalkiis ka yar Prince Nawaf bin Nayef isagana la qabtay .
Mas’uuliyiinta Sucuudiga si faahfaahsan ugama aysan jawaabin xadhiga loo geystay amiiradaas.
Xadhigan ayaa ah xasuuqii ugu dambeeyay ee dhaxal sugaha boqortooyada Mohammed bin Salman, kaasoo ku soo afjaray xukunkiisii ​​xabsi daa’im culimada caanka ah iyo kuwa u ololeeya iyo waliba amiirrada iyo aqoonyahanada ganacsiga.
Dhaxal sugaha, wiilka boqorka, ayaa sidoo kale la kulmay dhaleeceyn culus oo caalami ah oo ku saabsan dilkii foosha xumaa ee loogu gaystey Jamal Khashoggi gudaha qunsuliyada boqortooyada Istanbul bishii Oktoobar 2018.
Amiir Axmed, oo la sheegay in uu ku jiro da’da 70, waxa uu ku soo noqdey boqortooyada asaga oo ka soo hayaamay xaruntiisa London kadib fadeexadii Khashoggi, taas oo dadka qaarkii u arkeen in ay tahay dadaal lagu taageerayo boqortooyada.